Isitolo esidayisa yonke impahla 4.5mm non-ukushelela chofoza vinyl flooring Spc-2 Umkhiqizi kanye Umthengisi | Moyo
IVinyl Chofoza umsiki
I-4.5mm non-slip chofoza i-vinyl ...
Laminate Floor Ukuze ezuzisayo ...
laminate phansi parquet ...
Ecomomic laminate phansi EIR ...
I-4.5mm non-slip chofoza i-vinyl flooring Spc-2
Okuqinile okuqinile okunethezeka kwethebula le-vinyl, okwaziwa nangokuthi i-SPC flooring, kuyinketho eqinile kakhulu yokufaka amanzi i-vinyl emakethe. Uyazi ukuthi i-vinyl inedumela kanjani lokuguquguquka futhi ingabi namandla ...
Okuqinile okuqinile okunethezeka kwethebula le-vinyl, okwaziwa nangokuthi i-SPC flooring, kuyinketho eqinile kakhulu yokufaka amanzi i-vinyl emakethe.
Uyazi ukuthi i-vinyl inedumela lokuguquguquka futhi liqine kangakanani kunezinkuni zendabuko noma i-laminate? Well, WPC vinyl is pretty darn sturdy, but SPC rigid core core luxury vinyl flooring ifana nokuma kukhonkolo.
Lesi sakhiwo esincane, esincanyana singabonakala ngathi asinakho okungafani naso, kepha sinzima kunazo zonke ezinzima, eziklanyelwe ukumelana nokusetshenziswa nokuhlukunyezwa kwezindawo zentengiso.
Njenge-WPC, i-SPC flooring eqinile ye-vinyl flooring ingaphezulu kolayini hhayi nje ngokusebenza kepha ibukeka, futhi. Ngama-vinyl ayisisekelo aqinile, uzobona zonke izitayela ezishisa kakhulu zokhuni namatshe abukeka ngamatshe kumapulangwe amahle, akholisayo namathayili.
Isitezi se-vinyl se-vinyl esisezingeni eliphansi esivamile siqukethe izingqimba ezi-4.
Ungahluka phakathi kwabakhiqizi.
Isendlalelo Sokusekela: Lona umgogodla wepulangwe lakho.
I-SPC Core: Lokhu kungukuheha okuyinhloko! I-SPC flooring iqukethe umnyombo oqinile, ongenawo amanzi we-WPC. Ngeke ikhubazeke, ivuvuke noma ihlube noma ngabe ungaphansi ketshezi oluningi kangakanani. Lo mongo u-ultra-dense ungenawo amanxusa anamagwebu afana nalawo ozowathola kufulethi lendabuko le-WPC. Ikunika ukuqina okuncane ngaphansi kwezinyawo, kepha kwenza i-flooring ibe iqhawe elikhulu emnyangweni wokuqina.
Isendlalelo se-Vinyl Ephrintiwe: Yilapho uthola khona isithombe sakho esihle sezithombe esenza i-vinyl ibukeke (cishe) ifane nezinto zemvelo ezinjengetshe nokhuni. Imvamisa, i-vinyl flooring yokunethezeka okuyisisekelo i-vinyl esezingeni eliphakeme kakhulu emakethe. Lokhu kusho ukuthi uthola ukubukeka okungokoqobo abantu abazofunga ukuthi yizinkuni / itshe langempela!
Gqoka ungqimba: Njenge-vinyl yendabuko, ungqimba wokugqoka lufana nonogada wakho; kuyasiza ukuvikela ifulethi lakho ezintweni ezifakwayo, ekuklwebhekeni, njll. Isendlalelo sokuqina siyashuba, i-buffer yomqaphi womzimba wakho. I-SPC flooring yaziwa ngokuba ne-buff, ungqimba wokugqoka we-beefy ohlinzeka ngokuvikelwa okuningi. Uma ubheka i-vinyl flooring, kunjengoba (uma kungenjalo) kubalulekile ukubheka ubukhulu bensimbi yokugqoka njengobukhulu beplanki.
Umkhiqizo SPC Chofoza zaphansi
Ubukhulu 3.5mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0mm, eyenziwe ngokwezifiso
Ukudwetshwa I-EVA / IXPE 1.0 / 1.5MM / 2.0MM
Usayizi: 7 "* 48 '', 6" * 36 '', 9 '' * 60 '', 12 * 12 * 12 * 24,24 * 24, ngezifiso
Ukuthungwa Izinhlamvu Zezinkuni / Izinhlamvu Zemabula / Okusanhlamvu Kakhaphethi
Ubuso I-Embossor ekhanyayo, i-Embossor ejulile, i-Hand Scratch, i-Plain, Impact.
Iwaranti Iminyaka engama-20 yokuhlala, iminyaka eyi-15 yezohwebo
Uhlelo lokukhiya Uniclick
Imibala Ngaphezulu kwama-3 hundrends .pls asibuze ukuthi ufuna ukubona okuningi.
Langaphambilini Umkhiqizi waphansi we-4mm we-waterprooof spc
Olandelayo: Ifektri yokwehla ngomlilo eyi-5.0mm
laminate floor for parquet imibala
I-Laminate Floor yama-Wholesales nochungechunge olujwayelekile
Ifektri yokwehla ngomlilo eyi-5.0mm
I-Ecomomic laminate floor EIR Series
Umshini wokusika we-PVC Vinyl
Uyazazi zonke izinhlobo zaphansi?
Amaphuzu amathathu esitezi, amaphuzu ayisikhombisa wokufakwa, abantu abaningi abayinaki le mininingwane yokufakwa phansi!
Intela ezweni lomama: Usuku lokuzalwa oluhle kwiqembu lethu lamaKhomanisi lamaShayina
Cha, 67, Qilian Street, Shijiazhuang, Hebei, China.